HEL XASILOONI OO XAKAMEE CAADIFADAADA | Dhaymoole News
HEL XASILOONI OO XAKAMEE CAADIFADAADA
March 7, 2016 - Written by wariye999
In caadifaduhu ay xadhkaha goostaan sabab waxa u ah laba arimood: waa mida koowaade in la dareemo farxad xad-dhaaf ah, waa mida labaade in la dareemo dhibaato hor leh. Wuxuu nabigu yidhi (C.S.W): waxa la ii diidey laba yeedhmo oo xunxun: codka yeedha xiliga nimcada (guusha) iyo codka yeedha xiliga masiibada (guuldarada). Allena (S.W.T) wuxuu yidhi: (si aydaan uga murugoon wixii idinka tagey oo aydaan ugu farxin wixii la idin siiyey). Sidaasi darteed, nabigu (C.S.W) wuxuu yidhi: (Sabirkuba waa judha hore ee dhibtu ay ku asiibto). Hadaba qofka dareemayaashiisa hanta kolka ay dhibaatadu badantahay iyo kolka ay farxadu badantahayba—qofkaasi wuxuu ku guuleystaa darajada sugnaanta iyo xasiloonida, wuxuuna gaadhaa liibaanta raaxada iyo dhadhanka ka guuleysiga nafta.
Caadifadaha aadka u darani qofka wey daaliyaan—daal dhamaantii. Way cidhiidhiyaan laabtiisa, way xanuujiyaan waaney shidaan qalbigiisa. Marka uu cadhoodo wuu madoobaadaa oo dhididaa, wuu onkodaa oo talamaa; waxana korka soo mara wixii laabtiisa naxli jiifey, markaasu ka talaabaa soohdimihii cadaalada. Haduu farxo wuu asqoobaa sidii qof ga’gabsan; wuxuuna naftiisa ku iloobaa farxada kaligii ku giblan wuxuuna tiriyaa awoodihiisa. Xaaladaas uu ku jiro qofka dhibsada ee ka dheeraada wuu dhaleeceeyaa, wuxuu ilduufaa wanaagiisa, wuxuuna indhaha ka ridaa fadligiisa oo ka dhigaa waxaan jirin.
Sidaadarteed, qofka caadifadiisa xakameeya, caqligiisa xukuma, miisaama arimaha, mid kastana qiimihiisa siiyaa wuuxu arkaa xaqa, wuxuu gartaa hanuunka; wuxuuna hoos ugu degaa xaqiiqada dhabta ah.
Islaamku wuxuu keeney miisaanka toosnaanta, dabeecad wanaaga iyo qiyam aan doorsoon lahayn si lamida sida uu u keeney manhaj toosan, sharci raali laga yahay iyo diin barakeysan.
Diinta waxa lagu dhisey run iyo cadaalad, ka run sheegida warka iyo in dhex laga ahaado, axkaanta, odhaahda, ficilada la sameynayo iyo akhlaaqdaba. Wuxuu alle yidhi (S.W.T): (kalimadii rabigaa waxay ku soo gabagabowdey run iyo cadaalad). Taasna waxa daliil u sii ah, quraan soo dega aayadii u dambeysay—wuxuu alle (S.W.T)yidhi: (ka baqda maalin, alle xagiisa la idiin celindoono,nafkastana lasiindoono wixii ay kasbatey, iyadoon cidna la dulmiyeynin).
Maalintaasi wey imandoontaa qofkastana waxa lasiindoonaa wixii uu kasbadey waana dhab, waliba iyadoon cidna la dulmiyeynin taasina waa cadaalad. Hadaba basharyahaw alle karaameeyey, hel xasilooni oo xakamee caadifadaada.
Miyaaney kula ahayn caadifada in aad geed ku xidho, maadaama cidhibteedu ay cadho tahay, cadhadaasina ayba kaa talaabinkarto soohdimaha cadaaalada. Miyaaney kula aheyn sida alle quraanka inoogu sheegey, in warka aad sheegeysaa uu noqdo mid ku saleysan dhab iyo cadaalad. Aan ku waaniyee, runta been ha ku badhxin, cadaaladana dulmi ha ku doorsan. Hadaad iga aqbashey xasilooni waad heshay; caadifadna waad ka guuleysatey.
Xuquuqda Qoraalkani Waxay U Dhawrantahay Dhaymoolenews.com